1. Ɔkwan bɛn so na wohyiraa Daniel wɔ anigye kɛse a ɔkyerɛe wɔ Yehowa atirimpɔw mmamu ho no ho?
DANIEL nyaa anigye kɛse a ɔkyerɛe wɔ Yehowa atirimpɔw mmamu ho no so akatua kɛse. Wɔde bere a Mesia no bepue no ho adapɛn 70 ho nkɔmhyɛ a ɛma denhyɛ no maa no. Afei nso, wohyiraa Daniel ma ɔde n’ani hui sɛ ne manfo nkaefo anokwafo no resan akɔ wɔn man mu. Eyi sii wɔ 537 A.Y.B. mu, wɔ ɛrekɔ “Persia hene Kores afe a edi kan” no awiei.—Esra 1:1-4.
2, 3. Dɛn nti na ɛbɛyɛ sɛ Daniel anka Yudafo nkaefo no ho ankɔ Yuda asase so?
2 Na Daniel nka wɔn a wɔsan kɔɔ Yuda asase so no ho. Ebia na ne mfe a akɔ anim no bɛma akwantu ayɛ den ama no. Sɛnea ɛte biara no, na adwuma foforo da so ara wɔ Onyankopɔn adwenem ma no wɔ Babilon. Mfe abien twaam. Afei kyerɛwtohɔ no ka kyerɛ yɛn sɛ: “Persia hene Kores afe a ɛto so abiɛsa mu no, woyii asɛm bi adi kyerɛɛ Daniel a wɔtoo no din Beltesasar, na asɛm no yɛ nokware, na ɔko no sõ; na ɔtee asɛm no ase, na onyaa adehu no mu nhumu.”—Daniel 10:1.
3 “Kores afe a ɛto so abiɛsa” bɛyɛ 536/535 A.Y.B. Na bɛboro mfe 80 atwam fi bere a wɔde Daniel ne ahene asefo ne Yuda mmerantewa mmapɔmma kɔɔ Babilon no. (Daniel 1:3) Sɛ bere a Daniel duu Babilon no na onnii mfe aduonu a, ɛnde saa bere yi de na wadi bɛyɛ mfe 100. Hwɛ nokwaredi a ɔde somee ho din pa a onyae!
4. Ɛwom sɛ na Daniel mfe akɔ anim de, nanso ade titiriw bɛn na na ɔbɛkɔ so ayɛ wɔ Yehowa som mu?
4 Ɛwom sɛ na Daniel mfe akɔ anim de, nanso na ɔnyɛɛ nea ɔyɛ wɔ Yehowa som mu nwiei. Na Onyankopɔn bɛfa no so de nkɔmhyɛsɛm titiriw bi ama. Na ɛbɛyɛ nkɔmhyɛ a ɛbɛfa yɛn bere yi ne akyi ho. Nea ɛbɛyɛ na Yehowa asiesie Daniel ama adwuma foforo yi no, ohui sɛ ɛfata sɛ ɔbɛboa no ahyɛ no den ama adwuma a ɛda n’anim no.
ASƐM A ƐMA ADWENNWENE
5. Amanneɛbɔ ahorow bɛn na ɛbɛyɛ sɛ ɛhaw Daniel adwene?
5 Ɛwom sɛ Daniel ne Yudafo nkaefo no ansan ankɔ Yuda asase so de, nanso na ɔwɔ ɔpɛ kɛse sɛ obehu nea ɛrekɔ so wɔ ne man a ɔdɔ no no mu. Amanneɛbɔ a Daniel nsa kae ma ohui sɛ na nneɛma nkɔ yiye. Na wɔasan asi afɔremuka no na wɔato asɔrefie no nhyɛase wɔ Yerusalem. (Esra, ti 3) Nanso na aman a ɛbemmɛn no reko atia adansi adwuma no, na na wɔrebɔ pɔw bɔne atia Yudafo a wɔasan aba no. (Esra 4:1-5) Nokwarem no, na ɛrenyɛ den sɛ nneɛma pii betumi ahaw Daniel.
6. Dɛn nti na na tebea a ɛwɔ Yerusalem no rehaw Daniel?
6 Na Daniel nim Yeremia nkɔmhyɛ no. (Daniel 9:2) Na onim sɛ si a wɔbɛsan asi asɔrefie no wɔ Yerusalem ne nokware som a wɔbɛsan de asi hɔ no fa Yehowa atirimpɔw ma Ne nkurɔfo ho kɛse, na eyi nyinaa bɛba ansa na Mesia a wɔhyɛɛ ne ho bɔ no apue. Nokwarem no, na ɛyɛ hokwan kɛse ma Daniel sɛ onyaa “adapɛn aduɔson” no ho nkɔmhyɛ fii Yehowa hɔ. Ɛma ohui sɛ Mesia no bɛba wɔ “adapɛn” 69 mu wɔ bere a wɔaka asɛm a ɛne sɛ wɔnsan nkyekye Yerusalem nsi n’ananmu no akyi. (Daniel 9:24-27) Nanso, esiane sɛ na Yerusalem asɛe pasaa na asɔrefie no si kyɛe nti, ɛyɛ mmerɛw sɛ yebehu nea enti a Daniel abam tumi bui, ɔbotowee na odii awerɛhow.
7. Dɛn na Daniel yɛe adapɛn abiɛsa?
7 Kyerɛwtohɔ no ka sɛ: “Nna no mu na me, Daniel, me werɛ howee adapɛn abiɛsa; manni aduan a ɛyɛ dɛ, na nam ne nsã anka m’ano, nanso mansra koraa kosii sɛ adapɛn abiɛsa no wiee odu.” (Daniel 10:2, 3) Na “adapɛn abiɛsa” anaa nnafua 21 awerɛhodi ne mmuadadi no yɛ bere tenten. Ɛda adi sɛ ɛbaa awiei “ɔsram a edi kan no da a ɛto so aduonu anan.” (Daniel 10:4) Enti Twam a wodii no ɔsram a edi kan, Nisan, da a ɛto so 14 no ne ɛno akyi nnanson apiti afahyɛ no ka bere a Daniel dii mmuada no ho.
8. Bere a na atwam bɛn mu na Daniel srɛɛ Yehowa akwankyerɛ denneennen, na dɛn na efii mu bae?
8 Na biribi a ɛte saa ato Daniel pɛn wɔ bere bi a atwam mu. Saa bere no na wahaw wɔ Yehowa nkɔmhyɛ a ɛfa mfe 70 Yerusalem amamfõyɛ ho no mmamu ho. Dɛn na Daniel yɛɛ saa bere no? Daniel kae sɛ: “Na mede m’anim mekyerɛɛ [Yehowa, NW] Nyankopɔn, sɛ mede mmuada ne atweaatam ne nso merepɛ mpaebɔ ne nkotɔsrɛ.” Yehowa buaa Daniel mpaebɔ no denam ɔbɔfo Gabriel a ɔsomaa no baa ne nkyɛn bɛkaa asɛm a ɛhyɛɛ no nkuran yiye kyerɛɛ no no so. (Daniel 9:3, 21, 22) So saa bere yi nso Yehowa bɛyɛ saa ara na ɔde nkuranhyɛ a Daniel hia kɛse no ama no?
ANISOADEHU A ƐYƐ HU
9, 10. (a) Na Daniel wɔ he bere a onyaa anisoadehu no? (b) Ka nea Daniel hui wɔ anisoadehu no mu.
9 Daniel nsa kaa nea ɔhwehwɛ no. Ɔtoa so ka nea afei esi kyerɛ yɛn: “Na mewɔ asu kɛse Hidekel ano. Na memaa m’ani so mehwɛe, na hwɛ, ɔbarima bi a ofura nwera na Ufas sika bɔ n’asen ni.” (Daniel 10:4, 5) Na Hidekel yɛ nsubɔnten anan a efi Eden turo mu no mu biako. (Genesis 2:10-14) Wɔ Tete Persia no, na wɔfrɛ Hidekel sɛ Tigra, a ɛno mu na Hela din Tigris fi. Wɔfrɛɛ asase a ɛda ɛne Eufrate ntam no sɛ Mesopotamia, na ɛkyerɛ sɛ “Nsubɔnten Ntam Asase.” Eyi si so dua sɛ bere a Daniel nyaa anisoadehu yi na ɔda so wɔ Babilon asase so, ɛwom sɛ ebia na onni Babilon kurow ankasa mu de.
10 Anisoadehu a Daniel nyae bɛn ara ni! Ɛda adi sɛ ɛnyɛ onipa bi kɛkɛ na ohuu no bere a ɔmaa n’ani so no. Daniel de nkyerɛkyerɛmu a emu da hɔ yi ma: “Na ne nipadua te sɛ sikabereɛbo, na n’anim te sɛ anyinam, na n’aniwa te sɛ ogyaframa, na n’abasa ne n’anan te sɛ ayowa a wɔahoa ho, na ne kasa nnyigyei te sɛ ɛpo huuyɛ nnyigyei.”—Daniel 10:6.
11. Tumi bɛn na anisoadehu no nyae wɔ Daniel ne nnipa a na wɔka ne ho no so?
11 Ɛwom sɛ nea Daniel hui no hyerɛn de, nanso ɔkae sɛ: “Mmarima a ɛka me ho no anhu ade no.” Esiane biribi a wɔankyerɛkyerɛ mu nti, “ehu kɛse kaa wɔn, na woguan kohintawee.” Enti, wogyaw Daniel nkutoo wɔ asubɔnten no ho. “Anisoadehu kɛse yi” nyaa no so tumi araa ma ɔkae sɛ: “Ahoɔden bi anka me mu, na m’ahoɔfɛ dan yɛɛ mmɔbɔmmɔbɔ, na mannya ahoɔden biara.”—Daniel 10:7, 8.
12, 13. Dɛn na ɔsomafo no (a) ntade? (b) ne nipaban kyerɛ?
12 Ma yɛnhwɛ ɔsomafo nwonwafo yi a ɔmaa ehu kɛse kaa Daniel no. Na “ofura nwera na Ufas sika bɔ n’asen.” Wɔ tete Israel no, na wɔde nwera pa a wɔafira a wɔde sika kɔkɔɔ anwene mu na ɛyɛ ɔsɔfopanyin no abɔso, asɔfotade a ɔde bisa Onyankopɔn apɛde ne nkatabo ne asɔfo afoforo no ntade. (Exodus 28:4-8; 39:27-29) Enti, na ɔsomafo no atade kyerɛ kronkronyɛ ne dibea a nidi ka ho.
13 Ɔsomafo no nipaban nso maa ehu kaa Daniel—ne nipadua a ɛte sɛ aboɔden bo, n’anim hyɛnhyɛn, n’aniwa a ɛte sɛ ogyaframa, n’abasa ne n’anan akɛse a ɛhyerɛn yiye no. Ne nne a egyigye denneennen mpo no kanyan ehu. Na eyi nyinaa kyerɛ sɛ ɔkorɔn sen onipa. Na ‘ɔbarima a ofura nwera’ yi nyɛ obiara sɛ ɔbɔfo bi a ɔwɔ dibea kɛse wɔ Yehowa trabea kronkron a ɛhɔ na ɔde asɛm bi fi bae no mu. *
WƆHYƐ ‘ƆBARIMA A WƆDƆ NO YIYE’ DEN
14. Na mmoa bɛn na Daniel hia na watumi atie ɔbɔfo no asɛm no?
14 Na asɛm a Yehowa bɔfo wɔ ma Daniel no mu yɛ duru na asete yɛ den. Na Daniel hia mmoa a ɛbɛma wanya honam ne adwene mu ahoɔden ansa na watumi atie asɛm no. Esiane sɛ na ɔbɔfo no nim eyi nti, ofi ɔdɔ mu boaa Daniel na ɔhyɛɛ no nkuran. Ma yentie sɛnea Daniel ankasa ka nea esii no.
15. Dɛn na ɔbɔfo no yɛ de boaa Daniel?
15 “Na metee ne nsɛm nne no, na m’ani so birii me ma mehwee ase, na m’anim butuw fam.” Ɛbɛyɛ sɛ ehu na ɛmaa Daniel ani so birii no. Dɛn na ɔbɔfo no yɛ de boaa no? Daniel kae sɛ: “Na hwɛ, nsa bi bɛkaa me kanyan me ma mikunkon me nankoroma ne me nsa so.” Afei nso, ɔbɔfo no de nsɛm yi hyɛɛ odiyifo no nkuran sɛ: “Daniel, ɔdɔfo, tie nsɛm a merebɛka makyerɛ wo, na gyina wo nan so, efisɛ wɔasoma me wo nkyɛn.” Ne nsa a ɔde kaa Daniel ne awerɛkyekyesɛm a ɔka kyerɛɛ no no hyɛɛ no den. Ɛwom sɛ na Daniel ho ‘popo’ de, nanso ‘ɔsɔre gyinaa hɔ.’—Daniel 10:9-11.
16. (a) Yɛyɛ dɛn tumi hu sɛ Yehowa tie n’asomfo mpaebɔ ntɛm ara? (b) Dɛn nti na ɔbɔfo no kyɛe ansa na ɔrebɛboa Daniel? (Fa adaka no mu nsɛm ka ho.) (d) Asɛm bɛn na na ɔbɔfo no rebɛka akyerɛ Daniel?
16 Ɔbɔfo no daa no adi sɛ wahyɛ da aba sɛ ɔrebɛhyɛ Daniel den. Ɔbɔfo no kae sɛ: “Nsuro, Daniel, na efi da a wode wo koma too so sɛ wobɛte ase na wobɛbrɛ wo ho ase wo Nyankopɔn anim no, wɔate wo nsɛm, na me nso, wo nsɛm nti na mebae.” Afei ɔbɔfo no kyerɛ nea enti a ɔkyɛe. Ɔkae sɛ: “Na Persia ahemman no bapɔmma siankaa me adaduonu da biako, na hwɛ, mmapɔmma atitiriw no mu biako, Mikael, bae bɛboaa me, na metraa hɔ Persia ahene no nkyɛn.” Bere a Mikael bɛboaa ɔbɔfo no, otumi wiee n’adwuma no na ɔbɛkaa asɛm a egye ntɛmpɛ yiye yi kyerɛɛ Daniel. “Na maba sɛ merebɛma woate nea ɛbɛyɛ wo man, nna a edi akyiri no mu; na nna no ho anisoadehu da so wɔ hɔ.”—Daniel 10:12-14.
17, 18. Ɔkwan bɛn so na wɔboaa Daniel ne mprenu so, na dɛn na eyi ma otumi yɛe?
17 Sɛ anka Daniel de anigye bɛpere ne ho sɛ ɔbɛte anwonwasɛm a ɛte saa no, ɛte sɛ nea nsɛm a ɔtee no haw no. Kyerɛwtohɔ no ka sɛ: “Na ɔne me kaa nsɛm yi no, mede m’anim misii fam, na metɔɔ mum.” Nanso na ɔbɔfo a wasoma no no ayɛ krado sɛ obefi ɔdɔ mu aboa no—ne mprenu so. Daniel kae sɛ: “Na hwɛ, obi a ɔte sɛ nnipa mma sɛso kãa m’anofafa, na mibuee m’ano mekasae.” *—Daniel 10:15, 16a.
18 Bere a ɔbɔfo no de ne nsa kaa Daniel ano no, ɛhyɛɛ no den. (Fa toto Yesaia 6:7 ho.) Bere a Daniel tumi san kasae no, otumi kyerɛkyerɛɛ ahokyere a na ɔwom no mu kyerɛɛ ɔbɔfo a na wɔasoma no no. Daniel kae sɛ: “Owura, anisoadehu no mu m’akwaa ahima, na ahoɔden biara nni me mu; na ɛbɛyɛ dɛn na me wura akoa yi betumi ne me wura yi akasa? efisɛ afei de, ahoɔden biara nni me mu, na ɔhome bi nso nni me mu.”—Daniel 10:16b, 17.
19. Ɔkwan bɛn so na wɔboaa Daniel ne mprɛnsa so, na dɛn na efii mu bae?
19 Na ɛnyɛ sɛ Daniel renwiinwii anaa ɔde anoyi rema. Na ɔreka n’amanehunu ho asɛm kɛkɛ, na ɔbɔfo no gyee asɛm a ɔkae no toom. Enti, ɔbɔfo a na wɔasoma no no boaa Daniel ne mprɛnsa so. Odiyifo no kae sɛ: “Na obi a ɔte sɛ onipa sɛso san bɛkaa me bio, na ɔhyɛɛ me den.” Bere a ɔbɔfo no de ne nsa aka no ahyɛ no den akyi no, ɔkyekyee ne werɛ sɛ: “Nsuro, ɔdɔfo, asomdwoe nka wo, yɛ den, yɛ den!” Na ɛte sɛ nea nsa a wofi ɔdɔ mu de kaa Daniel ne saa nsɛm a ɛma denhyɛ no ne ade a Daniel hia. Dɛn na efii mu bae? Daniel kae sɛ: “Na ɔne me kasae no, mehyɛɛ me ho den, na mise: Ma me wura nkasa, efisɛ woahyɛ me den.” Afei de na Daniel asiesie ne ho ama adwuma foforo a ɛyɛ den.—Daniel 10:18, 19.
20. Dɛn nti na na egye mmɔdenbɔ na ama ɔbɔfo a wɔasoma no no atumi ayɛ n’adwuma no?
20 Bere a ɔbɔfo no hyɛɛ Daniel den boaa no ma onyaa adwene ne nipadua mu ahoɔden akyi no, ɔbɔfo no san kaa nea enti a ɔbae. Ɔkae sɛ: “So wunim nea enti a mebaa wo nkyɛn? Na afei na mɛsan me ne Persia bapɔmma no akɔko; na merebefi makɔ a, hwɛ, Hela bapɔmma no bɛba. Nanso mɛkyerɛ wo nea wɔakurukyerɛw nokware nhoma no mu, na obiara nni hɔ a obegyina aso me mu atia eyinom gye mo bapɔmma Mikael.”—Daniel 10:20, 21.
21, 22. (a) Dɛn na yebetumi asua afi Daniel osuahu no mu afa sɛnea Yehowa ne n’asomfo di no ho? (b) Dɛn na afei wɔhyɛɛ Daniel nkuran wɔ ho?
21 Hwɛ ɔdɔ a Yehowa wɔ ne sɛnea odwen afoforo ho! Ogyina nea n’asomfo tumi yɛ ne wɔn sintɔ so na ɔne wɔn di bere nyinaa. Ɛtɔ mmere bi a, ɔma wɔn adwuma a onim sɛ wobetumi ayɛ, ɛwom mpo sɛ wɔte nka sɛ wontumi nyɛ de. Nanso, ɔwɔ ɔpɛ sɛ obetie wɔn na ɔde nea wohia na aboa wɔn ma wɔayɛ wɔn nnwuma no ama wɔn. Momma yensuasua yɛn soro Agya, Yehowa, bere nyinaa denam ɔdɔ mu a yebefi de nkuranhyɛ ne denhyɛ ama yɛn mfɛfo asomfo no so.—Hebrifo 10:24.
22 Ɔbɔfo no awerɛkyekyesɛm no hyɛɛ Daniel nkuran yiye. Ɛwom sɛ na Daniel mfe akɔ anim de, nanso afei de na wɔahyɛ no den ma wasiesie ne ho sɛ obegye nkɔmhyɛ atitiriw afoforo akyerɛw ato hɔ ma yɛanya so mfaso.
^ nky. 13 Ɛwom sɛ wɔmmɔ ɔbɔfo yi din de, nanso ɛte sɛ nea ɔne ɔbɔfo koro no ara a wɔtee sɛ ɔka kyerɛɛ Gabriel sɛ ɔmmɛboa Daniel ma ɔnte anisoadehu bi a na wanya no ase no. (Fa Daniel 8:2, 15, 16 toto 12:7, 8 ho.) Afei nso, Daniel 10:13 kyerɛ sɛ Mikael, “mmapɔmma atitiriw no mu biako,” bɛboaa ɔbɔfo yi. Enti, ɛbɛyɛ sɛ na ɔbɔfo a wɔammɔ ne din yi nya hokwan ne Gabriel ne Mikael bom yɛ adwuma.
^ nky. 17 Ɛwom sɛ ɛbɛyɛ sɛ ɔbɔfo a na ɔne Daniel rekasa no ara na ɔde ne nsa kaa n’ano na ɔmaa n’ani so tetew no de, nanso sɛnea wɔkyerɛw asɛm no kyerɛ sɛ ebetumi ayɛ ɔbɔfo foforo, ebia Gabriel na ɔyɛɛ saa. Sɛnea ɛte biara no, ɔbɔfo bi hyɛɛ Daniel den.
• Dɛn nti na Yehowa bɔfo kyɛe ansa na ɔrebɛboa Daniel wɔ 536/535 A.Y.B. mu?
• Dɛn na Onyankopɔn bɔfo a na wasoma no no ntade ne ne nipaban kyerɛ fa ne ho?
• Mmoa bɛn na na Daniel hia, na ɔkwan bɛn so na ɔbɔfo no de maa mprɛnsa?
• Asɛm bɛn na na ɔbɔfo no rebɛka akyerɛ Daniel?
[Adaka wɔ kratafa 204, 205]
So Wɔyɛ Abɔfo a Wɔyɛ Ahwɛfo Anaa Sodifo a Wɔyɛ Adaemone?
YEBETUMI asua pii afi nea Daniel nhoma no ka wɔ abɔfo ho no mu. Ɛka nea wɔyɛ de di Yehowa asɛm so ne mmɔden a wɔbɔ sɛ wɔbɛyɛ wɔn nnwuma awie ho asɛm kyerɛ yɛn.
Onyankopɔn bɔfo kae sɛ bere a ɔreba ne Daniel abɛkasa no, “Persia ahemman bapɔmma” siw no kwan. Bere a ɔbɔfo a na wɔasoma no no ne no koe nnafua 21 akyi no, ɔnam Mikael, “mmapɔmma atitiriw no mu biako” mmoa nkutoo so na onyaa kwan kɔe. Ɔbɔfo no kae nso sɛ ɔbɛsan ne saa ɔtamfo no ne ebia “Hela bapɔmma” no akɔko. (Daniel 10:13, 20) Na eyi nyɛ adwuma ketewa mma ɔbɔfo mpo! Ɛnde, na henanom ne saa Persia ne Hela mmapɔmma no?
Nea edi kan no, yehu sɛ wɔfrɛ Mikael sɛ “mmapɔmma atitiriw no mu biako” ne “mo bapɔmma.” Akyiri yi wɔbɛfrɛɛ Mikael sɛ “ɔbapɔmma kɛse a ogyina hɔ ma [Daniel] man.” (Daniel 10:21; 12:1) Eyi kyerɛ sɛ Mikael ne ɔbɔfo a Yehowa paw no sɛ onni Israelfo no anim mfa sare no so no.—Exodus 23:20-23; 32:34; 33:2.
Nea esi saa adwene yi so dua ne osuani Yuda asɛm a ɛne sɛ “ɔbɔfo panyin Mikael ne ɔbonsam redi akameakame kasakasae Mose amu ho” no. (Yuda 9) Mikael dibea ne ne tumi ma ɔyɛ “ɔbɔfo panyin” a ɛkyerɛ “ɔbɔfo titiriw” ankasa. Nea ɛfata sen biara no, yentumi mfa dibea a ɛkorɔn yi mma obi foforo biara sɛ Yesu Kristo, Onyankopɔn Ba no, bere a na ɔmmɛtraa asase so ne bere a waba kɔ no akyi.—1 Tesalonikafo 4:16; Adiyisɛm 12:7-9.
So eyi kyerɛ sɛ Yehowa nso paw abɔfo ma wɔhwɛɛ aman te sɛ Persia ne Hela so de kyerɛɛ wɔn kwan wɔ wɔn nsɛm mu? Wiɛ, Yesu Kristo, Onyankopɔn Ba no, kaa pefee sɛ: ‘Wi yi ase sodifo rennya me hɔ hwee.’ Yesu san kae sɛ: “M’ahenni mfi wi yi ase . . . m’ahenni mfi ha.” (Yohane 14:30; 18:36) Ɔsomafo Yohane kae sɛ “wiase nyinaa da ɔbɔne no mu.” (1 Yohane 5:19) Ɛda adi pefee sɛ wiase aman no mmaa Onyankopɔn anaa Kristo akwankyerɛ anaa ahenni ase da. Ɛwom sɛ Yehowa ma “atumfoɔ a wɔkorɔn” no kwan ma wɔtra hɔ di wiase amansɛm ho dwuma de, nanso ɔmpaw n’abɔfo sɛ wɔnhwɛ wɔn so. (Romafo 13:1-7, NW) Satan Ɔbonsam nkutoo na obetumi de “mmapɔmma” anaa “sodifo ahorow” asi wɔn so. Wɔbɛyɛ adaemone a wɔyɛ sodifo na ɛnyɛ abɔfo a wɔyɛ ahwɛfo. Enti, adaemone dɔm, anaa “mmapɔmma” a aniwa nhu wɔn wɔ hɔ a wɔhyɛ nnipa atumfoɔ akyi, ma enti ɛnyɛ nnipa nkutoo na wɔde aman ntam ntawntawdi ba.
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 199]
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 207]
Share Share Onyankopɔn Somafo Hyɛ No Den
dp ti 12 kr. 198-209